लौं आयो यौन इच्छा जागृह हुने बित्तिकै खुल्ने कपडा ! | Rajmarga
यो विज्ञान र प्रविधिको जमाना हो । त्यसैले धेरै असम्भव कुराहर सम्भव भएका छन् । यस्तै एउटा असम्भव कुरा विज्ञानले सम्भव गराएको छ।
चीनमा एउटा यस्तो प्रविधिको विकास गरिएको छ जसको माध्यमबाट मानिसमा यौन इच्छा जागृह भएको पत्ता लाग्नेछ । त्यति मात्र होइन, यो प्रविधिसँगै अर्को यस्तो पहिरन तयार गरिएको छ, जुन मानिसमा यौन इच्छा जागृत हुने बित्तिकै आफै गायब हुनेछ।
यो अनौठो पहिरन नेदरल्याण्ड्स र चीनको फेशन्, आर्ट तथा आर्किटेक्चर क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी स्टुडियो रुसेगार्देले बनाएको हो । कम्पनीले यो अनौठो डे«स इंटिमेसी २.० नामबाट एक फैशल प्रोजेक्टअन्तर्गत तयार गरेको हो । यो पारदर्शी हुने ड्रेसलाई इंटिमेसी व्हाइट तथा इंटिमेसी ब्ल्याक दुई प्रकारमा तयार गरिएको छ।
यो ड्रेसले मुटुको धड्कनअनुसार काम गर्ने गर्दछ । सेक्सका विषयमा जब मुटु धड्कन थाल्छ तब बडीबाट कपडा कायम हुनेछ। यो अनौठो ड्रेस बनाउन इलेक्ट्रोनिक वायरिङ तथा एलइडीको प्रयोग गरिएको छ। कम्पनीका अनुसार यो ड्रेस कुनै पनि समारोहमा लगाउन सकिन्छ। यति मात्र होइन, कम्पनीले योभन्दा पनि एडभान्स भर्सन बनाउन तयारी सुरु गरिसकेको छ। एजेन्सी
Previous post: पछाडि मोटो पर्स राख्नेहरु होसियार ! जाला मेरुदण्ड !! बच्ने उपाय यस्ता छन्
Next post: थाहा पाउनुहोस् एक दम्पत्तीको भावुक काहानी: २२ बर्ष देखि ढलमा बास